कुन ल्यापटप हामी हाम्रो बच्चा किन्न गर्नुपर्छ? - समाचार नियम
कुन ल्यापटप हामी हाम्रो बच्चा किन्न गर्नुपर्छ?
शीर्षक यो लेख “कुन ल्यापटप हामी हाम्रो बच्चा किन्न गर्नुपर्छ?” ज्याक Schofield द्वारा लेखिएको थियो, बिहीबार 5th नोभेम्बर मा theguardian.com लागि 2015 09.31 UTC
हामी हाम्रो छोरा आफ्नो नवौं जन्मदिन को लागि एक नोटबुक वा ल्यापटप प्राप्त सोच रहे. उहाँले यस्तो शब्द रूपमा सफ्टवेयर आवश्यक हुनेछ, पावरपोइन्ट र एक्सेल, र समय मा उहाँले इन्टरनेट कोडन मा हुन सक्छ. म पनि एउटा छुट्टै माउस र किबोर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो डक गर्न सक्छ भने यो एक राम्रो विचार हुनेछ लाग्छ.
हामी यो एक जबकि लागि उहाँलाई रह्छ सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ तर हामी पैसा धेरै खर्च गर्न खर्च गर्न सक्दैन. केरी
जहाँसम्म म मेरो वार्षिक भ्रमणको देखि बताउन सक्नुहुन्छ रूपमा बिस्तर (पूर्व ब्रिटिश शैक्षिक प्रशिक्षण र प्रौद्योगिकी देखाउनुहोस्), सबैभन्दा विद्यालय अब उपभोक्ता-ग्रेड एन्ड्रोइड / एप्पल पाटी र Windows ल्याप्टप प्रयोग. तथापि, बिस्तर 2015 विन्डोज 2-मा-1 "detachables" तिर एक प्रवृत्ति देखाए, म सिफारिस चाहन्छु के छ जो.
एक अलग गर्न सकिने (म माथि गरे) एक स्पर्श-स्क्रीन ट्याब्लेट किबोर्ड डक मा प्लग जहाँ एक विन्डोज कन्वर्टिबल छ. खैर ज्ञात उदाहरणहरू को एसस T100TAF र सबै Microsoft सतहहरु समावेश. दोहोरो कार्यक्षमता विद्यालय अलग पाटी र ल्याप्टप किन्न छैन मतलब, जबकि विन्डोज अनुप्रयोग स्टूडियो यो सजिलो शिक्षकहरू सरल विन्डोज बनाउन लागि बनाउँछ 10 कोडिङ बिना अनुप्रयोगहरू.
ल्याप्टप मा कमजोर लिंक को कब्जा छ, र मान्छे स्क्रिन आफ्नो ल्याप्टप उठाने गरेर कब्जा जोड सक्छन्. खराब विचार. Detachables मा, यस स्क्रीन सामान्यतया बलियो चुम्बक द्वारा सुरक्षित छन्, र टिका धेरै कम नाजुक हेर्न. वास्तवमा, केही अलग गर्न सकिने कुनै टिका छ - जस्तै यो Lenovo Miix3र आगामी डेल XPS 12 - तर तपाईं सजिलै स्क्रिनको कोण परिवर्तन गर्न सक्दैन.
म त्यसैले एक अलग गर्न सकिने एक परम्परागत ल्याप्टप भन्दा लामो पछिल्लो आशा चाहन्छु, वा 360-डिग्री कब्जा संग एक कन्वर्टिबल.
विन्डोज 10 एन्ड्रोइड जस्तै धेरै ट्याब्लेट अनुप्रयोगहरू छैन, न त एप्पल आईप्याड गुणस्तर अनुप्रयोग, तर सबैभन्दा क्षेत्र ढाकिएको छन्, र तिनीहरूले मूलतः एक मुक्त बोनस छौं. एक विन्डोज अनुप्रयोग छैन जब, तपाईं अझै पनि पूर्ण बल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (ट्याब्लेट-गुणवत्ता भन्दा राम्रो) वेब ब्राउजर र परम्परागत विन्डोज कार्यक्रम को चलान लाखौं. साथै, पाठ्यक्रम, विन्डोज पीसी मा एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू चलान धेरै तरिकामा छन्, जस्तै BlueStacks र AmiDuOS.
बच्चाहरु लागि ल्यापटप
बच्चाहरु लागि प्रविष्टि-स्तर ल्याप्टप हिमाचल प्रदेश प्रवाह छ 11. यो यसको कम मूल्य लागि एकदम मजबूत छ (£ 199.99 गर्न £ 169,97), तर यो एक टच स्क्रीन छैन, र स्क्रीन अलग गर्न सकिने छैन.
पछिल्लो केहि महिना लागि, रातो HP मंडप X2 10-n055na मेरो रोजाईहरु £ 249,99 मा detachables को छ. यो पुरानो एसस T100TAF भन्दा बढी ठोस महसुस, एक राम्रो किबोर्ड छ, र एक सभ्य स्क्रीन. तथापि, एसस बस सञ्चालन छ T100HA, जो मंडप X2 मा सुधार 10, किबोर्ड अलिकति सानो छ तर.
यो एसस T100HA विन्डोज संग जहाज पहिलो खुद्रा ल्याप्टप को छ 10 preinstalled, र Windows 8.1 मिसिन अब दुकानबाट खाली भइरहेका छन्. पीसी विश्व, उदाहरणका लागि, हिमाचल प्रदेश मंडप X2 बिक्री छ 10 विन्डोज संग 8.1 £ 199,97 लागि, त्यसैले म एक विन्डोज भने छक्क हुनेछैन 10 संस्करण चाँडै देखिन्छ.
म पहिले को एसर स्विच बेवास्ता गर्नुभयो 10 र 11 सामान्यतया £ 300 £ 350 को - - तर तिनीहरूले अधिक खर्च किनभने स्विच 10E £ 229,95 मा एक नजर लायक हुन सक्छ. म पनि बेवास्ता गर्नुभएको Toshiba स्याटलाइट मिनी क्लिक, म 8.9in स्क्रिन धेरै सानो छ लाग्छ किनभने. तर विन्डोज बढाई सेटिङ पर्याप्त उच्च जान्छ भने, शायद यो एक बच्चाको लागि धेरै सानो छ. तपाईं एक यूहन्ना लुईस भण्डारमा एउटा एसस T100HA यी मिसिन दुवै तुलना गर्न सक्षम हुन सक्छ, र यूहन्ना लुईस एक दुई वर्ष ग्यारेन्टी समावेश.
यी प्रवेश-स्तर दुई-मा-व्यक्तिका सबै एटम-आधारित प्रोसेसर र मुख्य स्मृति 2GB छ, भण्डारण प्रदान गर्न एक 32GB eMMC फ्लैश स्मृति चिप संग. तिनीहरूले स्पष्ट स्मृति 4GB र भण्डारण 64GB संग राम्रो हुनेछ, तर यस्तो मिसिन पाउन कठिन छन्, र अधिक खर्च. यो छिटो तय गर्न छ एक अतिरिक्त 32GB थप्न एक microSD कार्ड वा अधिक भण्डारण. तपाईं किन्न भने एक दुई-मा-एक विन्डोज संग 8.1 र Windows यो उन्नयन 10, पहिलो कार्ड थप्न: म स्थापना समाप्त गर्न पर्याप्त ठाउँ खाली थिएन अपग्रेड को 32GB मिसिन को एक.
म £ 250 भन्दा तपाईं एक बच्चाको लागि एक ल्याप्टप मा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ छ कि मान छु. तपाईं कम खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक कट-मूल्य खोज्न Lenovo Miix 3. तीन महिना पहिले, म £ 150 को लागि एउटा नयाँ किनेको, तर आज म सट्टा £ 250 एसस T100HA प्राप्त चाहन्छु.
किबोर्ड र docks
सबैभन्दा ल्याप्टप एक "सार्वभौमिक" डकिंग स्टेशन संग काम गर्नेछ, यस्तो रूपमा Plugable UD-3900, तर म तिमीलाई एक आवश्यक लाग्छ छैन. सबैभन्दा ल्याप्टप एक डकिंग स्टेशन प्रयोग बिना तपाईं बाह्य USB वा ब्लुटुथ किबोर्ड मा प्लग गरौं हुनेछ. प्रशस्त छन् बच्चाहरु लागि विशेष डिजाइन रंगीन कीबोर्ड, र धेरै स्पर्श-टाइप ट्यूटोरियल.
तथापि, को एसस T100HA नयाँ छ USB प्रकार सी पोर्ट, त्यसैले तपाईं एउटा सानो एडप्टरका आवश्यक हुनेछ.
म तपाईं आफ्नो छोराको ल्याप्टप लागि प्रणाली प्रशासकलाई हुन योजना छन् चलाउन, र उहाँलाई आफ्नै दिन बच्चा खाता. यो तपाईं समय सीमा सेट गर्न दिन्छ, अनुपयुक्त वेबसाइटहरु ब्लक, खेल सेट उमेर सीमा, र कति पैसा निर्दिष्ट (कुनै पनि भने) उहाँले अनलाइन खर्च गर्न सक्छन्. तपाईं दूर यी सेटिङहरू देखि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ account.microsoft.com/family.
विन्डोज 8.1 र 10 तपाईं आफ्नो छोराको गतिविधिहरु को एक साप्ताहिक रेकर्ड इमेल हुनेछ: कति घण्टा उहाँले आफ्नो पीसी प्रयोग गरिन्छ, उहाँले भ्रमण गर्नुपर्छ वेबसाइटहरू, र कसरी लामो उहाँले आफ्नो मनपर्ने अनुप्रयोगहरू खर्च. तपाईंले यो सेवा प्रयोग गर्न छैन - यो वैकल्पिक छ - तर यो पूर्वनिर्धारित चालू गर्नुपर्छ.
त्यहाँ जस्तै व्यावसायिक विकल्पहरू छन् जादू डेस्कटप, तर साना बच्चाहरु को लागि साँच्चै हो.
तपाईं समय समयमा देखि ल्यापटप मा लग गर्नुपर्छ, तपाईंको व्यवस्थापक खाता प्रयोग, सबै ठीक छ भनेर जाँच्न. बाल खाता राम्रो सुरक्षित छन्, र Windows 10 स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ, तर यो कुरा मा एक आँखा राख्न राम्रो विचार छ, र अतिरिक्त विरोधी-भाइरस चेक चलान.
कागजातहरू बचत गर्न आफ्नो छोरा प्रोत्साहन, आफ्नो Microsoft खाता मुक्त OneDrive अनलाइन भण्डारण गर्न फोटो र अन्य फाइलहरू, र / वा एसडी मेमोरी कार्ड गर्न. तपाईं अस्थायी यसलाई पछाडि र फोटो थप्न आफ्नो पीसी गर्न कार्ड स्विच गर्न सक्नुहुन्छ, मनपर्ने संगीत फाइलहरू, युट्युब भिडियो र अन्य सामग्री.
मा Microsoft Office कार्यक्रम मुक्त संस्करण छन् OneDrive, र तपाईं Windows पसल केही रूपमा मुक्त अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ. म यो खरीद वा9वर्षीया लागि पूर्ण डेस्कटप कार्यक्रम स्थापित लायक छ लाग्छ छैन, तपाईं सदस्यता छन् नभएसम्म कार्यालय 365 घर. यो पीसी मा पाँच मान्छे को लागि पूर्ण कार्यालय सुइट प्रदान, Macs, ट्याब्लेट र स्मार्टफोन, प्लस प्रत्येक प्रयोगकर्ता भण्डारण एक terabyte, £ 79,99 एक वर्षको लागि. अन्यथा, LibreOffice एक मुक्त विकल्प छ.
तपाईं पनि पूर्व-स्थापना सक्छ Minecraft एक कार्यक्रम वा रूपमा अनुप्रयोग, को स्क्र्याच कार्यक्रम वातावरण - एक नजर छ स्क्र्याच सुरु गर्दै पहिलो - र खान एकेडेमी. तपाईं कार्यपट्टिमा यी र अन्य कार्यक्रम पिन सक्नुहुन्छ, वा डेस्कटपमा प्रतिमा राख्न, तिनीहरूलाई फेला पार्न सजिलो बनाउन.
तपाईं ज्याक लागि अर्को प्रश्न मिल्यो? यो इमेल Ask.Jack@theguardian.com
34591	1 लेख, ज्याक सोध्न, कम्प्यूटिंग, विशेषताहरु, ज्याक Schofield, ल्याप्टप
← स्याउ टिभी समीक्षा (2015) [भिडियो] तपाईंको उपकरण तपाईं अन्धो लुट्ने हुनुहुन्छ, जवाबी हमला! →